I-LSR kunye neRubber Molding -IChapman Technology Co, Ltd.
Inkqubo yokubumba irabha engamanzi ivelisa AMAGQABAZA custom siko kunye nokuphela-ukusetyenziswa iindawo iindawo ngeentsuku ezili-15 okanye ngaphantsi. Sisebenzisa izinto zokubumba zealuminium ezibonelela ngezixhobo ezonga iindleko kunye nemijikelezo yokukhawulezisa imveliso, kunye nokugcina amabakala ahlukeneyo kunye neeuromitha zezinto zeLSR.
Ngaba Ulwelo Abicah ngerabha Ukubumbela Umsebenzi?
Ukubumba kwe-LSR kwahluka kancinane kumbumba wenaliti ye-thermoplastic ngenxa yokuguquguquka kwayo. Njengesixhobo sealuminium esemgangathweni, isixhobo sokubumba se-LSR senziwe sisebenzisa i-CNC machining ukwenza isixhobo sobushushu obuphezulu esakhelwe ukumelana nenkqubo yokubumba ye-LSR. Emva wokugaya, isixhobo olukhazimlisiweyo ngesandla iinkcukacha kubathengi, nto leyo evumela iinketho umgangatho umgangatho ezintandathu umgangatho.
Ukusuka apho, isixhobo esigqityiweyo silayishwe kwi-LSR ethe ngqo yesitofu yokubumba isitayile esichanekileyo esenzelwe ulawulo oluchanekileyo lobungakanani bokudubula ukuvelisa ezona ndawo zingangqinelaniyo ze-LSR. KwiiProtolabs, amalungu e-LSR asuswe ngesandla ekubumbeni, njengoko izikhonkwane ze-injector zinokuchaphazela umgangatho wenxalenye.
Izinto ze-LSR zibandakanya i-silicones esemgangathweni kunye namabakala athile ukuze alingane izicelo ezahlukeneyo kunye namashishini afana nonyango, ezemoto kunye nokukhanya. Kuba i-LSR iyi-polymer ye-thermosetting, imeko yayo ebunjiweyo isigxina-yakuba imisiwe, ayinakuphinda inyibilike njenge-thermoplastic. Xa ugqatso lugqityiwe, iinxalenye (okanye isampulu yokuqala yokubaleka) zifakwa ebhokisini kwaye zithunyelwa kungekudala emva koko.